News - New Abata airless karama – Why go airless for your ịchọ mma nkwakọ?
Mbadamba mgbapụta na-enweghị nchebe na-echebe ngwaahịa ndị nwere mmetụta dịka anụ ahụ na-elekọta ude, serums, ntọala, na ihe mkpuchi ndị ọzọ na-enweghị ihe mgbochi site na igbochi ha ịmalite ikpughe ikuku, si otú a na-eme ka ndụ dịkwuo elu ruo 15% karịa. Nke a na - eme ka teknụzụ na - enweghị ikuku bụrụ ọdịnihu ọhụụ nke ịma mma, ọgwụ, na ihe ịchọ mma.
Kalama ahụ na-enweghị ikuku enweghị eriri ọkpọkọ, kama ọ bụ diaphragm nke na-ebili iji wepụta ngwaahịa a. Mgbe onye ọrụ dara mbà mgbapụta ahụ, ọ na-emepụta mmetụta agụụ, na-adọta ngwaahịa ahụ elu. Ndị ahịa nwere ike iji ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaahịa niile na-enweghị ihe mkpofu ọ bụla hapụrụ ma ha agaghị echegbu onwe ha maka nsogbu ahụ na-abịakarị na mgbapụta ọkọlọtọ na nkwakọ ngwaahịa.
Na mgbakwunye na ichebe usoro gị na ịbawanye ndụ ya, karama na-enweghị ikuku na-enyekwa akara ngosi. Ọ bụ ngwugwu nkwakọ ngwaahịa dị elu nke na-abịa na atụmatụ dị iche iche iji zute ọnọdụ gị.
Nkwakọ ngwaahịa bụ isi ihe dị na ihe ịchọ mma na ụlọ ọrụ na-esi isi ụtọ. Nkwakọ ngwaahịa na ụlọ ọrụ ndị a abụghị naanị metụtara nchekwa na nchekwa, kamakwa metụtara ijide n'aka na ngwaahịa na-anọgide n'ọnọdụ ha kachasị mma n'oge njem na nchekwa. Dị mkpa nke ejiji onwe onye, ​​tinyere mkpa na-eto eto nke puku afọ, amanye ọtụtụ ụlọ ọrụ na-esi isi ísì ụtọ iji gboo mkpa nke ahịa mpaghara. Ọmụmaatụ, Ezi Ezi Ọgba, ụlọ ọrụ na-esi ísì ụtọ nke dị na Ahmedabad, tọrọ ntọala na 2014. companylọ ọrụ ahụ webatara ngwongwo ya dị oke ọnụ ahịa na mpaghara mpaghara ma dekọọ 40% agbụ na-agakarị na-ere ahịa na 2016.
Na United States, mmụba na-arịwanye elu nke teknụzụ nkwakọ ngwaahịa ịchọ mma dị elu na uto nke ngwaahịa nlekọta anụ ahụ bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị dị mkpa na-eme ka ahịa na-eto eto. Nlekọta ntu na ihe ndị na-esi ísì ụtọ yiri ka ọ bụ nchegbu kachasị nke ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ahịa na mba ahụ. N'ihi ọchịchọ na-arịwanye elu maka ihe ịchọ mma, ọtụtụ ndị na-eweta ihe ịchọ mma na-anakwere ma na-agbanwe agbanwe ihe ngwugwu iko iji meziwanye uru ndị ahịa ma melite nchekwa ngwaahịa.
Anya ude ite, Ngosiputa Ngwa Powder with Sifter, Ihe Ude Ngosiputa Ngwa, Creamchọ mma ude ite, Cream Ololo Ngosiputa Ngwa, Black karama jel Polish,